बेमौसमि वर्षाले कञ्चनरपुरको १२ हजार हेक्टर क्षेत्रको धान नष्ट ! – Krishakkhabar
बेमौसमि वर्षाले कञ्चनरपुरको १२ हजार हेक्टर क्षेत्रको धान नष्ट !
Thursday, October 28th, 2021 | krishak khabar
कञ्चनपुर ११ कार्तिक
कात्तिकको पहिलो साता आएको बाढी र डुबानका कारण कञ्चनपुर जिल्लामा १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. दिलबहादुर विष्टले बाढी र डुबानका कारण १२ देखि १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली क्षति पुगेको जानकारी दिए ।
किसानलाई भने यस वर्ष चामल किनेर खानुपर्ने अवस्थामा आएको भन्दै चिन्तन छ । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का किसान राधे रानाले आफ्नो दुई बिघा खेतमा लगाइएको धानबाली भित्र्याउने बेला आएको बर्सातले क्षति पुगेको बताउनुभयो । “परिवारलाई वर्षभरि खानलाई हुन्छ भनेर अरुको खेतसमेत भाडामा लिएर धान लगाएको थिएँ”, रानाले भन्नुभयो, “बाली काटेर थ्रेसर लगाउभन्दा एक्कासि खेतमै धान डुबेर काम नलाग्ने भयो ।” कैलाली र कञ्चनपुरमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी क्षति धानबालीमै भएको छ । ज्ञान केन्द्रले दुईरतीन दिनभित्र क्षतिको यकिन विवरण आउने जनाएको छ । स्रोत ः रासस
TOTAL PAGE VIEWS: 958918